steemit – Page7– @mmunited
eSteem Surfer version 1.0.11 has been released
eSteem Surfer version 1.0.11 ထွက်လာပါပြီ။ ​ဒီ app ကတော့ good-karma ကနေ ပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Esteem app ကတော့ mobile ဖုန်းအတွက် ဖြစ်ပြီး eSteem Surfer ကတော့ desktop အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ ဆိုတာသိချင်ရင် အောက်က ပိုစ့်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ https://steemit.com/esteem/@ptcmyanmar/utopian-io-tutorial-for-esteem-surfer-84d2f9112aa2dest Desktop သမားတွေပါ esteem ကိုသုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app မှာပါဝင်တဲ့ အဓိက ထူးခြားချက်ကတော့ top posts feature ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုစ့်တွေထဲမှာ ပိုက်ဆံအများဆုံးရထားတဲ့ ပိုစ့်လေးခုကို ထိပ်ဆုံးမှာ ပြထားပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုထူးခြားချက်ကတော့ esteem-university ပဲဖြစ်ပါတယ်။ good-karma ကနေ လူတွေကို esteem app အကြောင်း၊ …
contest: mmunited logo contest5SBD
Today I am going to makealogo contest for @mmunited. I need two logos with the same design but different in shape and size. The following is the rules to make logo: It need to be circle and suitable size for steemit profile picture. It need to be square and 150 x 150 dimension …
my first post using xopus
This is my first post using xopus. The plan is still going. Current status I believe in angels Something good in everything I see I still believing something magical is coming and helping us. Review I still need some customization for my website. Overall is good and worth to use. I can use …